Badbaadinta bisadaha waaweyn ee Afrika: Khubarada duurjoogta iyo dalxiiska ayaa walwalsan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Badbaadinta bisadaha waaweyn ee Afrika: Khubarada duurjoogta iyo dalxiiska ayaa walwalsan
dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Bisadaha waaweyn ee Afrika
Xuska Maalinta Libaaxa Adduunka ee bishaan, ilaalinta duurjoogta Afrika ayaa ka walwalsan mustaqbalka mid ka mid ah bisadaha waaweyn ee Afrika - libaaxyada - ee qaaradda ka dib markii ay kordheen tirada kooxaha ugaarsiga ee raadinaya xubnaha jirkooda. Kooxaha ilaalinta duurjoogta iyo ururrada samafalka ee Afrika ayaa ka walaacsan kiisaska sii kordhaya ee ugaadhsiga libaaxa, inta badan Galbeedka Afrika halkaas oo xayawaankan caanka ah ay halis weyn ku jiraan, halka ugaadhsiga uu ku batay guud ahaan gobolka bariga iyo koonfurta Afrika.
Dalabka sii kordhaya ee qaybaha libaaxyada ee Koonfur -bari Aasiya ayaa sii hurisay ugaarsiga Afrika.
Ku -xadgudubka xoola -dhaqatada xadiiqadaha ilaalinta duurjoogta ayaa ilaa hadda sababay isku dhacyo u dhexeeya xoolo -dhaqatada reer guuraaga ah.
Tani waxay horseedaysaa dilalka libaaxyada sumaynta, toogashada waranka, iyo fallaadhaha sumaysan.
“Dhacdooyinka sare ee sumayn libaax ayaa sidoo kale laga soo sheegay Bariga Afrika iyada oo bulshooyinka reer guuraaga ahi ay aargoostaan ​​ka dib markii lagu weeraray xoolahooda, ”ayuu yiri Edith Kabesiime, Maareeyaha Ololaha Duurjoogta ee Xafiiska Ilaalinta Xoolaha Adduunka ee Afrika ee Kenya.
Dib -u -noqoshada Sanctuary - Xerada Crater Ngorongoro
Waxay sheegtay in dalabka alaabada libaaxa, sida lafaha iyo ilkaha, ee warshadaha dawada dhirta ee sida xawliga ah u koraya ay sidoo kale sii hurisay ugaadhsigooda duurjoogta Afrika.
Kabesiime wuxuu sheegay in khataraha kale ee ku wajahan libaaxa Afrika ay ka mid yihiin taranta maxaabiista iyo ugaadhsiga koobabka, isagoo intaas ku daray in dejinta siyaasado cusub, xeerar, iyo ololeyaal sare loo qaaday ay fure u yihiin badbaadinta hilibka hilibka iyo joogtaynta adkaysiga deegaannada dabiiciga ah ee qaaradda.
Tirada dadka libaaxyada Afrika ayaa lagu qiyaasay inay hoos u dhacday ilaa 50% 25kii sano ee la soo dhaafay. Khubarada dhawrista ayaa sheegay inay jirto halis dhab ah oo ku aaddan libaaxa inuu ka badbaado deegaan, cadaadis ka yimaada iskahorimaadka dadka, iyo kororka ganacsiga sharci darrada ah ee qaybaha libaaxa.
"Libaaxyadu waxay qayb muhiim ah ka yihiin nooleyaasha noolaha iyo hab -nololeedka dabiiciga ah, dhacdadan ayaa gacan ka geysan doonta kaliya inaan kor u qaadno wacyigelinta xaaladdooda laakiin sidoo kale inay iftiimiso iftiinka guulaha badan ee badan ee aan u baahannahay inaan kor u qaadno si aan u hubinno sii jiritaankooda mustaqbalka," Kenya Tourism Wasiir Mr. Najiib Balaala ayaa yiri.
Tirakoobyada Ilaalinta Xoolaha Adduunka ayaa tilmaamaya in tirada dadka libaaxa ee Afrika hadda lagu qiyaasay 20,000, taasoo ka yar 200,000 libaax boqol sano ka hor.
Koonfur Afrika ayaa ah umadda kaliya ee oggolaatay taranka libaax ee baaxadda leh, halkaas oo xoolaha inta badan lagu hayo bakhaarro ama xayndaabyo.
Libaaxyada lafahooda iyo qeybaha kaleba lagu dilo ayaa u soo baxay inay yihiin halis dhowaan soo wajahay. In kasta oo lafaha libaaxu aysan ka mid ahayn dawooyinka dhaqameed ee Shiinaha, maadaama tirada shabeellada ay hoos u dhacayso, haddana badeecooyinkan sida fudud loo heli karo ayaa galaya suuqyada duurjoogta ee sharci -darrada ah beddelkooda.
Libaaxyadu waa xayawaanka ugu soo jiidashada badan dalxiisayaasha, iyagoo jiidaya dad badan oo dalxiisayaal ah oo safari ku leh Bariga Afrika.